Eyona midlalo mihle xa udikwe ekhaya ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Eyona midlalo ilungileyo xa unesithukuthezi ekhaya
Juni 20, 2019 0 IiCententarios 937
Ngaba ngezo ntsuku xa isithukuthezi sikukhathaza, kwaye ungenanto ekhaya? Ngaba uyafuna ukonwaba, kodwa awazi njani? Ewe, namhlanje ndiza kukunika imibono eyonwabisayo kunye nezihlisayo Imidlalo xa unesithukuthezi ekhaya.
Sonke siyathanda ukuzonwabisa, kodwa xa siziva sinesithukuthezi yinto eqhelekileyo kakhulu kangangokuba asazi ukuba masenze ntoni ukutshintsha loo meko. Nangona kunjalo, namhlanje ndiza kukufundisa ukulwa nesizungu kunye Ezona zinto zokuzonwabisa zilungileyo nezonwabisa.
Kungekudala, uza kulwazi olukhulu kunye nemidlalo ekonwabisayo, ukuze wonwabe ekhaya, nokuba uhlala wedwa okanye uhamba naye. Bazi ngoku!
Uluhlu lwemidlalo xa unesithukuthezi ekhaya
Namhlanje kukho amakhulu Juegos online onokuthi udlale ekhaya xa uziva unesithukuthezi, ucaphukile okanye ungenamvakalelo. Ndiyakuqinisekisa, uya kuyithanda kwaye uya kukukhuthaza kakhulu.
Ukongeza, unokuhlala uhlela imidlalo ekhaya kwaye mema abahlobo bakho kunye nosapho. Kukhetho oluhle ukuphepha isithukuthezi ekhaya ngexa langokuhlwa okanye ebusuku.
Namhlanje ndiza kwabelana nawe uluhlu, kunye neendlela ezahlukeneyo imidlalo xa unesithukuthezi ekhaya. Ukusuka kwimidlalo ye-Intanethi, imidlalo yeeselfowuni kunye nePC, ukuya kwimidlalo yebhodi, ongayidlala wedwa okanye nomntu.
Ukuba uwuthanda umculo, uya kuthanda ukuba ucule phantsi. Ngu- umdlalo womculo ukudlala ngokungcono neqela elikhulu labahlobo.
Ukudlala lo mdlalo uchulumancisayo, iqela labathathi-nxaxheba kufuneka lahlulwe laba ngamaqela amaninzi kunye nokuchonga umntu oya kulo Yila igama
Ukusuka kulo mzuzu, amaqela anomzuzu wokucinga malunga neengoma ezinokwenzeka ezineligama. Ixesha liphelile, iqela ngalinye liyatshintshela kulo cula ingoma Oko kubandakanya elo gama.
Yiyo umdlalo wePC onokuthi udlale nabahlobo bakho ekhaya. Ngumdlalo owonwabisayo nowonwabisayo woxinzelelo apho kufuneka ube nobuchule bokukwazi ukufikelela iinjongo.
Ukusela kakhulu kuyakuthatha ukuba mkhulu Imeko yasekhitshini, Apho uya kuba yingcaphephe kwingcaphephe. Umsebenzi wakho ophambili iya kuba kukulungiselela konke ukutya okucelwe ngabathengi, kwixesha elimxinwa.
Imigaqo yomdlalo ilula kakhulu ukuba uyiqonde, kwaye las imisebenzi ilula kakhulu ukuyenza. Nangona kunjalo, ixesha elingqongqo onalo lokugqiba umsebenzi ngamnye unokukuqhuba uphambanise.
Ngumdlalo okonwabisayo, ongayi kufuna ukuyeka ukudlala.
Ukulungiselela umdlalo kufuneka yenza iithayile ezilinganayo Kumdlali ngamnye. Elinye lamaqhekeza kufuneka libizwe ngokuba "ngumbulali", omnye "ngumcuphi" kunye nabanye "ngamaxhoba."
Emva koko, iitshipsi zikho zisongelwe kwaye zithutyiwe ukuze umdlali ngamnye azikhethele nakanye. Kuxhomekeka kwigama le-chip abayichukumisileyo, iya kuba yindima eza kudlalwa ngumdlali ngamnye kuloo mdlalo.
Abathathi-nxaxheba kufuneka bahlale kwisangqa, ukuze bakwazi bajongane, ngaphandle kokuthetha nelizwi.
Umdlalo ke lowo Umbulali uwayeka amaxhoba ukuba abulale, Nangona kunjalo, akufanele wambulala umcuphi. Ukuba umbulali wenze i-2 okanye ngaphezulu ukubulala ngokuphumelelayo, umcuphi kufuneka anike isigwebo sakhe kwaye athi ngubani umbulali. Ngaphandle koko, uya kulahleka kwaye umbulali uya kubaleka.
Kuyonwabisa umdlalo wabadlali abaninzi kwi-intanethi, apho umdlali ngamnye azabalaza ukuze aphumelele kwaye aphumelele uloyiso.
Umdlalo uqulathe ukwenza xhaphaza abachasi Ngokuqhuma kwazo zonke iintlobo. Ezi ziqhushumbisi ziibhombu ezinamathelayo, iigranti, imigodi, i-TNT kunye nokunye. Nangona kunjalo, kufuneka unonophele kakhulu ukuze bangakwenzi ukuba uqhume ngelixa usokola ukufezekisa iinjongo zenqanaba ngalinye.
Unako Yikhuphele kuGoogle Play, ngokukhawuleza nangokukhululekileyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, uya kuchitha ixesha lokuzonwabisa udlala nabahlobo ekhaya.
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye ye eyona midlalo iyonwabisa Ukudlala ekhaya xa unesithukuthezi.
KwiZombie Tsunami uya kuba zombie enokwazi ukuqhuba, Injongo yakhe kukonakalisa abahamba ngeenyawo abangena ngendlela yakho. Abahambi ngeenyawo abangakumbi osulele kwaye wenze imiceli mngeni yomdlalo, unokuqokelela amanqaku amaninzi kwaye uzuze amabhaso.
Njengoko uphakama uya kuba ukufikelela kwizixhobo ezitsha, ukusuka ekukhweleni isithuthuthu ukuya kukhwela irobhothi.
Zilungiselele ukubonisa amandla akho apheleleyo. Brain Wars yenye yazo Eyona nto ibalulekileyo kwimidlalo yengqondo ngokungathandabuzekiyo iya kubeka ukuba usebenzise ingqondo yakho ngendlela emnandi kakhulu kwaye eyonwabisayo.
Yiyo Inkqubo yemidlalo yengqondo apho, uya kulwa iimfazwe ezinkulu zolwazi kunye nabasebenzisi be-intanethi. Ukubetha umchasi wakho kuya kufuneka ube nobukrelekrele, ulunge kwaye uqaphele kakhulu kuzo zonke iinkcukacha.
Ukuthetha kwam noTom
Ngokuqinisekileyo, sele uvile malunga nomdlalo wam wokuThetha uTom, othandekayo kitten ephinda yonke into oyithethayo. Kwaye oko, ukongeza, kuphendula kuyo yonke into oyenzayo. Umdlalo uqulathe ukwamkela incinci onokuthi uyondle, unxibe, uhlambe kwaye umncede ukuba abe ikati endala.
Ngaphakathi kwe-App uya kufumana okungenani imidlalo ye-10 mini. Kwindlela onokwazi ngayo Qokelela imali Ukuthenga izixhobo ezintle ngesilwanyana sakho esibonakalayo. Eminye yemidlalo emitsha yile:
Ukubetha imouse, phakathi kwabanye.
Lo mdlalo umnandi kwaye umnandi uphakathi eyona midlalo ilungiselelwe abantwana kunye nenani le-1 ejikeleze amazwe e-130.
Iziqhamo Ninja Simahla
Inye ye ifunwa kakhulu kunye nemidlalo ekhutshelweyo, zombini, izixhobo ze-Android kunye ne-iOS.
Ngoku, iyafumaneka kwinguqulelo yayo ephuculweyo, ebandakanya abalinganiswa abatsha, izincedisi zazo zonke iintlobo, iinjongo kunye nenqanaba elinomdla kunye nelongezayo.
Kwiziqhamo Ninja Simahla kuya kufuneka ube eyiyo ninja yokusika iziqhamoNangona kunjalo, kuya kufuneka ulumkele iibhaluni. Ukuba usika ibhaluni yonke into iya kuqhuma. Ineendlela ezininzi ongazisebenzisa kumdlalo, ezinje: ukudityaniswa kweziqhamo, phakathi kwabanye.
Uya kubona ukuba ngalo mdlalo ukonwabisa uya kushenxisa isithukuthezi ngokukhawuleza.
Iindlela ezizidenge zokufa
Ikwabizwa ngokuba "Zizidenge iindlela zokufa". Injongo yalo mdlalo upholileyo kakhulu kukuthintela abalinganiswa abangahlekisiyo ukuba bangafi.
Ngumdlalo omfutshane kakhulu apho izinto ezininzi zenzeka ngaxeshanye. Ke ngoko, kufuneka unikele ingqalelo kwaye ulawule ngokukhawuleza ukuphepha ukufa koonodoli.
Phakathi kweemeko ofanele ukuphephe ukuba zenzeke, zezi umlingisi uwela kumkhondo kaloliwe, i-electrocute, phulukana nemali yakho, phakathi kwabanye.
Kodwa, ukongeza, kubandakanya imidlalo ye-29 mini eya kuvavanya ubugqwirha bakho.
Ngumdlalo otyholwayo oza kwiscreen sesixhobo sethu se-android. Ngumdlalo oxinzelelweyo woxinzelelo oya kususa isithukuthezi ngoko nangoko.
I-Microtrip Uyokuhambisa emzimbeni womntu, Injongo yakhe kukuhamba kuyo, kangangoko unakho.
Kumdlalo, uya kuba luhlobo lweseli ekufanele ukuba lujongane neentsholongwane kunye nezinye izinto, ukuze khuseleka kwaye uvakale kangangoko unako. Ukwenza oku, unokuzinceda ngokutya iiseli ezimhlophe ukwandisa ukuxhathisa kwakho.
Ngumdlalo kakhulu iyafana noMario Kart, kodwa ngokufikelela kwiindlela ezahlukeneyo zokhetho. Ukusuka kwiimoto eziguqulweyo, kulungelelwaniso lolwakhiwo kunye nolwakhiwo lwengoma yohlanga.
Nguye umdlalo okhuphiswano weklasikhi Ukudlala nabahlobo ukusuka, pc. Ke, ukuba unesithukuthezi ekhaya, vula ikhompyuter yakho kwaye uqale ugqatso.
Ngumdlalo onxungupheleyo kwaye kude kunesiqhelo. Akukho nto kwaye akukho nto ngaphantsi kwe a Inguqu engaqhelekanga yebhola, Kuyo imoto enamandla elwa nezinye iimoto ukufaka amanqaku.
Nangona kunjalo, rhoqo uku-dome omkhulu wenza amaqhinga ngamanye amaxesha ukuzama ukufikelela ebholeni. Nangona kunjalo, ngumdlalo ophucukileyo, ongacacanga kunye nomdlalo osisiphithiphithi ngandlela zonke. Kukonwabisa, kwaye kuyonwabisa.
Sifikelele esiphelweni sale posi, ndiyathemba ukuba ukonwabele ubungakanani ngezi zinto zintle imidlalo xa unesithukuthezi ekhaya. Ndiyakuqinisekisa ukuba awusoze uphinde ufumane isithukuthezi ekhaya. Ngaba nexesha elimnandi!
1 Uluhlu lwemidlalo xa unesithukuthezi ekhaya
1.1 Cula phantsi
1.3 Umbulali wink
1.6 Iimfazwe zobuchopho
1.7 Ukuthetha kwam noTom
1.8 Iziqhamo Ninja Simahla
1.9 Iindlela ezizidenge zokufa
Eyona midlalo ilungileyo xa unesithukuthezi kwi-Intanethi
Uyenza njani imali ngolwazi lwakho lwevidiyo kwiYouTube?